ဘလော့ – တေလာ Lopes ツဘလော့
VirtualBox ကို USB အသိအမှတ်မပြုပါဘူး 3.0
အတိအကျအဖြေတစ်ခုကိုတင်ပြမဟုတ်ဒီ post, ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, ငါမူကား VirtualBox နှင့် ပတ်သက်. အချို့စိတ်ပျက်မှတ်ပုံတင်ရန်ချင် (vB) နှင့် USB port များအသိအမှတ်ပြုမှု 3.0.
16 မတ်လ 2013 တေလာ Lopes	အလုပ်ရှုပ်နေ usb 3.0, E_INVALIDARGS, ဗျာဒိတ်ကို virtual box ကို, VirtualBox usb	မှတ်ချက် Leave
သင့်အိမ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော အီလက်ထရွန်နစ် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။, Light/RJ သို့မဟုတ် Furnas simulator ကိုသုံး၍ အတွင်းထဲတွင်နေပါ။! လေအေးပေးစက်တစ်လုံး ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိချင်ပါသလား။? ဒီ Post ကိုစစ်ဆေးပါ။!
4 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2010 တေလာ Lopes	စားသုံးမှုတွက်ချက်, လျှပ်စစ်, အလင်း, Simulator	မှတ်ချက် Leave
ပရောဖကျ – အားလုံးမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေ!
ဒါကပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ ဆိုက်ကို သင်၏မိတ်ဆွေများကိုယုံကြည်စေနိုင်လိမ့်မည် “ပရောဖကျသ” တကယ်တော့အားလုံးမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ရှိ. ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ.
8 ဇန္နဝါရီလ 2010 တေလာ Lopes	ဘာလို့ထင်လဲ, နောက်တာပါ, ပျော်စရာ, ပရောဖက်	6 မှတ်ချက်များ
My First ဘလော့ – inaugurating
အရာအားလုံးအစရှိပါတယ်, မ? ဒါကြောင့်ဒီ Post ကိုဒီဘလော့ဖွင့်ကြဘူး, အရာလျင်မြန်စွာဒီပဏာမခြေလှမ်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုးကား.
10 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	မှတ်ချက် Leave
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.645.836 ဝင်ရောက်ခွင့်